Dr. Tint Swe's Writings: Allergy to Eczema မတည့်တာနဲ့ နှင်းခူနာ
ဆရာမင်္ဂလာပါ။ အမျိုးသမီး အသက် ၃၅ နှစ်ပါဆရာ။ အသားတွေယားနေလို့ပါဆရာ။ တလလောက်ရှိပါပြီ။ အစကတော့ အဖုတွေထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ တစ်ရက်လောက်နေရင် အနာတွေဖြစ်လာတယ်။ ပြည်တော့မတည်ပါဘူးဆရာ။ လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေပဲပေါက်ပါတယ်ဆရာ။ ပထမ Genterleen-C cream လိမ်းပါတယ်။ မသက်သာပါဘူးဆရာ။ Fungiderm ပြောင်းလိမ်းတာလဲ မသက်သာလို့ပါဆရာ။ ကူညီပေးပါဦးဆရာ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
ယားတဲ့အနီပြင်-အဖုလေးတွေဆိုတာ အလာဂျီအခြေခံတယ်။ အလာဂျီဆိုတာ ခြင်လို အင်းဆက်ကောင် ကိုက်ခံရတာလည်းပါတယ်။ အတော်များများမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးစစ်ရင် ကယိကထများတယ်။ စစ်လိုက်ရင် ကိုယ်နဲ့မတည့်တာတွေစာရင်းနဲ့ ထွက်လာတတ်တယ်။ ကုသတာမှာ မတည့်တာကို ရှောင်ရတယ်။ မတည့်တာဆိုတာ သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့မတူဘူး စားစရာ၊ အသုံးအဆောင်၊ အဝတ်အစား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
- Anti-itch cream and lotion
- Itch-Kill tube
- Medicate anti-itch cream
- Allegra (Relieces itch fast) cream
ဖြစ်လိုက်-ပျောက်လိုက်ဆိုရင် (၁) မတည့်တာထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလား။ အလာဂျီဆေးတွေနဲ့ရတယ်။(၂) ဖန်းဂတ်စ်ခေါ် မှိုပိုးဝင်သလား၊ သက်ဆိုင်တဲ့ဆေးသုံးရတယ်။ (၃) နှစ်ကူးနာလို အရေပြားနာတာရှည်ရောင်ခြင်းဖြစ်သလား။ နှင်းကူနာကုသလည်းလုပ်ရမယ်။ (၄) ကုပ်ရာကနေ ဗက်တီးရီးယားဝင်လို့ရောင်တာနဲ့ ပြည်ပါထပ်ဆောင်းတာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီအဆင့်မှာ ပိုးသေဆေးပါလိုမယ်။ ဖြစ်တာကိုသေချာသိမှသာ ဆေးနည်းကတည့်ပါမယ်။
နှင်းကူနာလိုဟာတွေ့ အမျိုးအစားတွေများလို့ ခွဲထားတယ်။
1. Atopic dermatitis အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ယားမယ်၊ နာတာရှည်တယ်၊ အရေပြားရောင်နေမယ်။ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နေမယ်။ မတည့်သာနဲ့ တွေ့ရင် ပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောဘဲ။
2. Contact eczema မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့မှုကနေဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစား၊
3. Seborrheic eczema အဆီပြန်နေတာမျိုး။
4. Nummular eczema အဝိုင်းပြားလေး သဏ္ဌာန်ရှိတယ်။
5. Neurodermatitis (simplex chronicus) အသက် ၂ဝ-၅ဝ ကြား အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ စိတ်ဖိအားနဲ့ပါ ဆက်စပ်တယ်။ အာရုံကြောနဲ့ ဆိုင်တယ်။
6. Stasis dermatitis ခြေထောက်မှာ အဖြစ်များတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ ဆိုင်တယ်။ သွေးပြန်ကြောထုံးသူတွေမှာ ဖြစ်တယ်။
7. Dyshidrotic eczema (Dyshidrotic dermatitis) လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
ဆေးကုရတာ ခက်ပါတယ်။ ယားတာ-ရောင်တာ သက်သာအောင်၊ ပိုမဆိုးအောင် လုပ်ပေးရတာ များတယ်။
1. လူနေမှုဘဝပုံစံပါ ပြောင်းဘို့ လိုတတ်တယ်။ မတည့်ဘူးလို့ အသေအချာသိတာကို ရှောင်ပါ။ လက်ရှိအလုပ်ကနေ ပြောင်းနိုင်ရင် ပြောင်းရမယ်။
2. ဆေးလဲ တမျိုးတမျိုးပြောင်း သုံးရတတ်တယ်။ လိမ်းဆေးထဲမယ် ရေနည်းနည်းနဲ့ ဆီများတာ မသင့်ဘူး။
3. Corticosteroid creams လိမ်းဆေးတွေက ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေကလဲ ခပ်ပြော့ပြော့၊ ခပ်လတ်လတ် နဲ့ အပြင်းစားတွေ ရှိတယ်။
4. သိပ်ယားနေရင် (အင်တီဟစ်တမင်း) စားဆေးတွဲပေးရတယ်။ အိပ်တဲ့သတ္တိပါတာမျိုး ဥပမာ Diphenhydramine (Benadryl), Hydroxyzine (Atarax, Vistaril) နဲ့ Cyproheptadine တွေ သုံးသင့်တယ်။
5. တခါတလေ Corticosteroids (Prednisone) စားဆေးပါပေးရတယ်။ ရက်တိုသာ သုံးရမယ်။
6. Ultraviolet light therapy (Phototherapy) ခရမ်းလွန်-ရောင်ခြည်နဲ့လဲ ကုနိုင်တယ်။
7. Immunosuppressant (Cyclosporine) ရောဂါပြီးတာကို သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးမျိုးကိုလဲ တခါတလေ သုံးနိုင်တယ်။ Coal tar သုံးနိုင်တယ်။
8. FDA ကနေ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဆေး ၂ မျိုးရှိတယ်။ Tacrolimus (Protopic) နဲ့ Pimecrolimus (Elidel) တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီဆေးတွေက ရောဂါပြီးတာကို သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးမျိုး Calcineurin inhibitors အုပ်စုဝင် ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေတော့ မပေးသင့်ဘူး။ ကြီးတဲ့သူတွေမျာလဲ သတိနဲ့သာသုံးပါ။
• Dermatitis ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ အရေပြားအနာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/eczema.html
• Allergy and Worm နာတာရှည် (အလာဂျီ) နှင့် သန်ကောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-and-worm.html
• Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy.html
• Allergy Triggers (အလာဂျီ) ရစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရား (၁ဝ) ပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-triggers.html
• Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-medications.html